Chii chinonzi NFTs, Bubble, fashoni kana paradigm nyowani? | Linux Vakapindwa muropa
Mukupera kwemaXNUMX uye kutanga kwemaXNUMX, economics sesainzi yaifungidzirwa nevadzidzi vazhinji kuve neruzivo rwechiitiko chakafanana neicho cheTheology pasi paGalileo kana Darwin. Sezvo zvave zvinoenderana nepfungwa yekushomeka kwechinhu chepamberi (goridhe, mafuta, silicon) ikozvino inofanirwa kuzvigadzirisazve yenguva yakavakirwa pachinhu chakanyanya kuwanda; ruzivo.
Nechitarisiko che 3d kudhinda kubvumidza iyo diki-diki kugadzirwa kwezvigadzirwa kusvika panguva iyoyo yakachengeterwa makuru maindasitiri emiti, uye iya yemakristcheni yakadenha simba reAmerica mukugadzirwa kwemari, iwo maonero aiita kunge anosimbiswa.
1 Kudzoka kwekushomeka
2 Chii chinonzi NFTs?
3 Musiyano uripo pakati peNFTs uye cryptocurrencies
4 Zvigadzirwa zvinogona kutengeswa seNFTs
5 Mufashoni, bubble kana paradigm nyowani?
Tarisa uone mufananidzo uri pamusoro penyaya ino. Ndiyo imwe yandakatora kubva kubhangi remifananidzo inogona kutorwa mahara uye izvo hazvitombodi kutsanangura munyori. Zvinyorwa zveichi chinyorwa zvakawanikwa naGoogling. Kana iwe usiri kufarira manyorerwo andinoita, unogona kuwana zvimwe zvakawanda zvinyorwa kana mavhidhiyo anozvitsanangura zvirinani
Makore makumi mana apfuura, iwe ungadai wakafanirwa kuenda kuraibhurari kuti uwane ruzivo kana kubvunzurudza nyanzvi. Mufananidzo uyu ungadai wakaitwa neanogadzira dhizaini uyo aifanira kunge akateedzera kunetesa kuchenesa maitiro. Ipapo imwe nzira inofanirwa kushandiswa pakudhinda. Kuti ndisvike kuverengwa kumwe chete, ndinofanira kunge ndakatanga pazasi mupepanhau ndikashanda nzira yangu kukwira kumatunhu akakwana kunditendera kuburitsa chero zvandaida zvine zita rangu pairi.
Nhasi, nekuda kwetekinoroji, mukana wekugadzira uye kuburitsa zvemukati hauperi.
Asi, vhiri rinotendeuka zvakare.
Chii chinonzi NFTs?
NFTs vakazvarwa kubva paruoko rwe blockchain tekinoroji kusvika chengetedza kuti chinhu chinoramba chakasarudzika munharaunda umo zvese zvinogona kuteedzerwauye. Iwo mavara anomiririra Asina-Fungible Zviratidzo. Izvi zvinoreva kuti hazvigone kutsiviwa kana kuchinjaniswa nekuti zvine zvakasarudzika zvivakwa. Nenzira imwecheteyo, ivo havagone kumisikidzwa kana kukanganiswa nekuti chokwadi chavo chinotsigirwa nechitupa chakagadzirwa uchishandisa blockchain tekinoroji.
Iyo NFTs, sezvatakataura, iwo matokeni akasarudzika ane ruzivo rwakakosha rwakachengetwa mavari. Ruzivo urwu rwune yakasarudzika dhata yeNFTs iyo inobvumidza iko kuongorora uye kuisirwa kwe yavo muridzi uye kuchinjiswa kwematanho pakati pevaridzi.. Izvo zvisikwa uye kutenderera kweNFTs dzenhema hazvishande nekuti chinyorwa chimwe nechimwe chinogona kuteverwa kumashure kune iye wekutanga musiki kana mupi.
Zvichienderana nemusika mune iyo NFT inoshambadzirwa, iye wekutanga musiki anogona kuramba achiwana mibairo kubva kune anoteedzana kutengesa.
Musiyano uripo pakati peNFTs uye cryptocurrencies
Kunyangwe iyo tekinoroji iri kumashure kwekrisptocurrencies neNFTs yakafanana, pane musiyano wakakosha.
Kryptocurrencies iri fungibles, ndiko kuti, vanogona kuchinjaniswa vasina kuona mutsauko. Iyo siginecha yedhijitari inoperekedza Chiratidzo chega chega Kwete Fungile inoita kuti izvi zvisakwanisika.
Zvigadzirwa zvinogona kutengeswa seNFTs
Mavhidhiyo ezviitiko zvinozivikanwa.
Virtual maavatari uye zvimwe zvishandiso zvemitambo yemavhidhiyo.
Mufashoni, bubble kana paradigm nyowani?
Pakutanga, NFTs inoita kunge zano rakakura. vagadziri vanogona kutengesa zvirimo zvavo zvakananga kumutengi seNFT, iyo zvakare inovabvumidza kuti vachengetedze yakakwira muzana muzana yemubhadharo kupfuura iro rakasiiwa nemapuratifomu mazhinji. Sezvatakataura, mvumo yemari inogona kurongwa kuti igamuchire chikamu chekutengesa nguva dzese panenge paine shanduko yemaoko.
Mitengo yacho zvakare inokwezvas. Nyan Cat, GIF yekati ine tartlet muviri yakaonekwa muna 2011, yakatengeswa ingangoita mazana matanhatu emadhora zviuru mazana matanhatu pakutanga kwegore. Kune rimwe divi, mavhidhiyo ane NBA makwikwi akagadzira anopfuura madhora mazana mashanu emadhora mukutengesa pakupera kwaKurume. LeBron James imwechete yakaratidza NFT yakatengeswa inodarika $ 600,000.
Asi, nyanzvi dzinopa yambiro. sezvo iri tsika nyowani.
Muchinyorwa chinotevera tichaenda mune rumwe ruzivo nezve kugadzirwa uye kuchinjana kweNFTs uye neyakavhurika sosi matekinoroji anobatanidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chinonzi NFTs, Bubble, fashoni kana paradigm nyowani?